Tun Zarni Kyaw's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
33, MaleYangonMyanmar Share on Facebook
Blog Posts (2)Discussions (261)EventsGroups (15) Tun Zarni Kyaw's Likes Tun Zarni Kyaw's Friends
View All Tun Zarni Kyaw's Groups
Tun Zarni Kyaw's Discussions
အိုဘယ့် virus ရေးနည်း
Started this discussion. Last reply by Min Lwin Mar 14, 2011. Task Manager by .NET application
Started this discussion. Last reply by Tun Zarni Kyaw Mar 8, 2010. 10 Programming Languages You Should Learn Right Now
Started this discussion. Last reply by Arkar WINN MINN HTWE Mar 14, 2010. View All
Tun Zarni Kyaw's Page
Tun Zarni Kyaw replied to KO LWIN MG MG's discussion Visual Basic 6.0 in the group Visual Basic 6.0"http://patorjk.com/programming/tutorials/vb6codebank.htm
for more codes, search in Googlefor very unique problems and you can't google ... ask here"Jan 5, 2013Tun Zarni Kyaw and Htoo Maung Thait are now friendsMar 11, 2012Tun Zarni Kyaw replied to Gitoo's discussion Object-oriented programming မွာ တဲ႕ class, object ဆိုတာေတြကို လူပိန္းနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးၾကပါခင္ဗ်ာ"http://farm7.staticflickr.com/6032/6347393556_11db141199.jpg"Feb 23, 2012Tun Zarni Kyaw joined Min Lwin's groupMyanmar IT Wordsကွန်​ပျု​တာ​ကို​အသုံးပြု​ဖို့ အင်္ဂလိပ်​စာ လို​အပ်​ပါ​သလား။ အင်္ဂလိပ်​စာ မ​တက်​ရင်​ပဲ ကွန်​ပျု​တာ​နဲ့ ပတ်သက်​တဲ့ ပညာ​ရပ်​တွေ​ကို လေ့​လာ​လို့​မ​ရ​တော့​ဘူး​လား။အွန်​လိုင်း မြန်မာ​အိုင်​တီ​အဘိဓာန် ရေး​တဲ့ စနစ်​တစ်​ခု​ကို​ရေး​ကြ​ရအောင်။See MoreMar 30, 2011 8
Tun Zarni Kyaw postedablog postကျွန်တော့်ချစ်သူများ နှင့် ကျွန်တော်ကျွန်တော့်ချစ်သူများ နှင့် ကျွန်တော်<br /><br />ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး တော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားကြပြီထင်ပါတယ်။<br />ဒီ blog post ဟာ အပျင်းပြေဖတ်ရန် ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (မပျင်းတဲ့သူများ အချိန်ကုန်မှာဆိုးတဲ့သူများ မဖတ်ရပါ)<br />ကျွန်တော့်တစ်ယောက်တည်း အကြောင်း blog ရေးတင်လို့ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်ချစ်သူတွေ အကြောင်းတော့ ရေးလို့မဖြစ်ဖူးခင်ဗျ :D<br />(ရေးမိလို့ကတော နားရွက်ဆွဲခံရမယ် ဗိုက်ခေါက်လိမ်ခံရမယ် ထိုင်ထလုပ်ရမယ် ဒူးထောက်လက်မြှောက်လုပ်ရမယ်<br />ပြီးတော့…See MoreMar 18, 2011 19
Tun Zarni Kyaw and လင်းငယ် are now friendsMar 13, 2011v3ss replied to Tun Zarni Kyaw's discussion အိုဘယ့် virus ရေးနည်း"ROFL!!
STEAM POWRED HYDRAULIC WRAP DRIVE FROM HELL! CCOOL :D !
I dont know ifaburmese community exist to discuss such things , they are fun.
"Mar 11, 2011Wayne replied to Tun Zarni Kyaw's discussion အိုဘယ့် virus ရေးနည်း"like"Mar 10, 2011 More... RSS
Tun Zarni Kyaw's Blog
BarCamp Yangon 2010 and Me
Posted on January 24, 2010 at 11:30am 32 Comments
23 January 2010, Fucntion Hall 1, Myanmar Info-Tech, Yangon, Myanmar
ေန႔လည္ (၁)နာရီေလာက္မွာ BarCamp ကိုေရာက္ပါတယ္
ဦးရဲျမတ္သူ (MITP Member) က Font Converter တစ္ခုေတာ့ တစ္ခုပဲ ဘာလဲေတာ့မမွတ္မိေတာ့ဘူး :D အဲဒါကို present လုပ္ေနတာေတြ႔ပါတယ္
ျပီးေတာ့ Python နဲ့ Django အေၾကာင္းကို Foreigner ႏွစ္ေယာက္က present လုပ္ၾကပါတယ္။
သူတို႔ေျပာတဲ့ English စကားကလည္း… Continue ကျွန်တော့်ချစ်သူများ နှင့် ကျွန်တော်
Posted on November 23, 2009 at 3:00pm 19 Comments
ကျွန်တော့်ချစ်သူများ နှင့် ကျွန်တော်<br /><br />ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး တော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားကြပြီထင်ပါတယ်။<br />ဒီ blog post ဟာ အပျင်းပြေဖတ်ရန် ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (မပျင်းတဲ့သူများ အချိန်ကုန်မှာဆိုးတဲ့သူများ မဖတ်ရပါ)<br />ကျွန်တော့်တစ်ယောက်တည်း အကြောင်း blog ရေးတင်လို့ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်ချစ်သူတွေ အကြောင်းတော့ ရေးလို့မဖြစ်ဖူးခင်ဗျ :D<br />(ရေးမိလို့ကတော နားရွက်ဆွဲခံရမယ် ဗိုက်ခေါက်လိမ်ခံရမယ် ထိုင်ထလုပ်ရမယ် ဒူးထောက်လက်မြှောက်လုပ်ရမယ်<br… Continue AddaBlog Post
At 12:51pm on March 4, 2010, manawphyulay said… At 9:19pm on February 1, 2010, phyothweaye said… ကိုရာဗီစကားေျပာျပီးခ်ိန္stageရဲ႕အေနာက္ကိုဘာလုပ္ဖို႕သြားတာလဲဟင္ At 2:56pm on January 23, 2010, Bo Bo Myint Aung said… are u crazy? we can count through the survey........... plz think deep At 5:53pm on January 15, 2010, ko Arkar Htut said… I mean " Beware scholarship" At 5:40pm on January 15, 2010, ko Arkar Htut said… Sorry, This is my grammer mistake. At 9:07am on January 12, 2010, Myo Nyunt said… Hello
Good Morning nice to meet u At 8:20pm on December 31, 2009, manawphyulay said… At 4:25pm on December 27, 2009, pyiphyomgmgsoe gave Tun Zarni Kyawagift…Friendship DaisiesFriendship DaisiesFrom the Gift Store At 7:00pm on December 7, 2009, Mg Pyone said… Happy Birthday Sir =) At 6:39pm on November 28, 2009, ခ်က္ျကီး said… ဘရားသားေရ၊၊အဲဒီလုိဟူတ္ဖူးဗ်၊၊ကၽြန္ေတာ္ကအေကာင့္ဖြင့္ျပီးျပီ၊၊ဘာမွမလုပ္တတ္လို ့ေလ၊၊အဲဒါဘရားသားတို ့ေျပာျပပါလာ၊၊အဆင့္ဆင့္ေပါ ့၊၊ေက်းဇူးအရမ္းတင္မွာပါဗ်ာ၊၊ကၽြန္ေတာ္ .ning လဲစမ္းျပီးျပီ၊၊အဲဒါေလးေတာ့ရေသးဖူး
ျဖစ္ေနတယ္၊၊ကူညီပါဦး၊၊ No comments yet!